Waa maxay Daaweynta Proton - Sidee u shaqeysaa - Proton California
Si sax ah, Daweyn Kaansar Infekic yar oo Daaweynta Proton ah
California Protons waxay isticmaashaa tikniyoolajiyadda proton beam technology si ay uga caawiso la-dagaallanka kansarka saxnaanta aan caadiga ahayn iyo daryeelka ugu badan.
Waa maxay Daawaynta Proton?
Daaweynta 'Proton therapy' waa nooc aad u saxan oo aad u yar oo ah dawaynta kansarka. Protons waa ashyaa'da subatomic leh oo leh ganaax wanaagsan oo loo adeegsan karo laguna xakameyn karo in la joojiyo oo shucaaca toos loo keeno buro, oo aan ka badneyn darbiga burooyinka bannaanka. Tani waxay si gaar ah faa'iido ugu leedahay dadka u nugul shucaaca ama helay shucaac hore midkood ama si dhow agtaagga u baahan in la daweeyo.
Daaweynta Proton vs.
Shucaaca caadiga ah
Raajada caadiga ah iyo shucaaca proton waa labada nooc “shucaaca banaanka” shucaaca ku daaweynta loo adeegsado daaweynta noocyada kala duwan ee kansarka. Si kastaba ha noqotee, astaamaha midba midka kale aad ayuu u kala duwan yahay waxayna keenaan heerar kala duwan oo soo-gaadhista shucaac. Xaraashka caadiga ah ee raajada (x-ray) waxay ku keydiyaan tamarta wadooyinkooda ka hor inta aysan gaarin burada, sidaasna gaarsiinta shucaaca aan loo baahnayn oo waxyeelada leh unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha ku xeeran. Qiyaasta daaweynta Proton, dhinaca kale, waa la xakamayn karaa si loo keydiyo tamarta inteeda badan burada dhexdeeda.
Shucaaca raajada (raajada)
Ma laha lacag la aan ama koronto
Iftiiminta aadka u sareeya ee jirka ayaa shucaaca gaarsiin kara heer kasta oo unugyada ah
Rays wuxuu dhigayaa inta ugu badan qiyaasta shucaaca (gelitaanka qaddarka) u dhow maqaarka bukaanka, halka uu la falgalayo unugyada caafimaad ee ku dhow dusha sare, ka dibna ku ridaya qiyaasta haray ee shucaaca ionizing ee unugyada jirrada qoto dheer.
Raysku waxay sii wadaan inay shucaaca shucaacaan sida caadiga ah u gudbaan jirka (qaddarka bixitaanka) oo la mid ah sawirka raajada
Shucaaca qalin-qalin ee loo yaqaan 'Pencil Beam Proton Therapy Redaation'
Laydhka weyn ee loo yaqaan 'Proton beam' wuxuu ka kooban yahay walxo culus, oo la eedeeyay
Protons-ka ayaa gala jirka waxayna ku ridaan kaliya qiyaas yar inta ay ku socdaan bartilmaameedka oo gabi ahaanba ma jiraan wax dhaafsiisan
Qaadashada la nuugo si tartiib tartiib ah ayey u kordheysaa iyadoo la adeegsanayo qiyaasta weyn iyo xawaaraha hoose ilaa uu canabka gaaro ugu sarreeya Bragg - oo ah meesha ugu tamarta badan lagu kaydiyo—kaas oo si toos ah loogu tilmaamo goobta burada
Isla markii qulqulaya tamartaas, beylka proton wuxuu joogsadaa joogsi dhammeystiran, shucaac kasta oo dheeraad ahna wuu joogsadaa
Teknolojiyadda baarista ee loo yaqaan 'Pencil Beam Scanning Technology'
Si sax ah ayaa loogu soo gudbiyay 2 milimitir, teknolojiyada baarista qalin-jabinta ee loo yaqaan 'Intensity Modulated Proton Therapy or IMPT') waxay sii deysaa qadar sare oo shucaaca dilaaga kansarka kaas oo la jaan qaada qaabka gaarka ah iyo cabbirka burada. Xitaa meelaha sawirka adag, dhakhaatiirteena ayaa tilmaami kara oo maamuli kara iftiinka protons-ka si ay ugu istaagaan si sax ah qarka burada si ay ugu badbaadaan unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha ku xeeran.
Si ka duwan daaweynta hore ee daaweynta firfircoon ee dawaynta proton-ka ee faafa, xarunta tikniyoolajiyada sahaminta ee xargaha qalin-jabinta ayaa sii xoojinaysa saxnaanta shucaaca la gaarsiiyey. Awood u siinta dhakhaatiirta in ay dib u habeeyaan baaxadda iyo xoojinta weelka proton-ka, waxaan ku burburin karnaa burooyinka proton ciriiriga ah ee burooyinka qoorta, iyadoo aan kordhinayno xoojinta iyo lakabka lakabka lakabka gudaha burooyinka. Xarunta Protons ee California waxay ahayd xaruntii ugu horreysay ee bukaan-socodka ee loosoo bandhigo tikniyoolajiyadda proton-ka ee protons dhammaan shanta qolalka daaweynta.
Sawirka Cone Beam CT
Xarunta Daaweynta Kansarka ee Kansarka Protons ee San Diego waa xarunta kaliya ee lagu daweeyo protons ee ku taal California oo dhan, waana mid keliya oo tiro yar oo Maraykanka oo dhan ah, si joogto ah uga faa'iideysta Cone Beam CT (CBCT). Horumarkan muuqda ee sawirka CT wuxuu inaga caawinayaa inaan u soo qaadno teknoolojiyadda ugu horumarsan bukaannadeenna.
Waxaa loo adeegsaday iyada oo lala adeegsanayo teknoolojiyadda iskaanka alwaaxyada qalin-jabinta, Cone Beam CT waxay awood u siisaa isku-darka, ka dhakhso badan oo aamin ah ee sawirka joogtada ah ee CT. Iyada oo la adeegsanayo muraayadda sawirka unugyada u eg, ee shucaaca, cabbirka scannerka iyo waqtiga loo baahan yahay iskaanka ayaa si weyn hoos loogu dhigay, halka saxda sawirka la hagaajiyay. Waqtiga loo baahan yahay iskaanka buuxa waa caadi ahaan hal daqiiqad ka yar iyo qaddarka shucaaca ayaa boqol jibaar ka yar midka scannerka CT-ga caadiga ah.
Nidaamka Varian ProBeam Proton
Xarunteena proton waxay hoy u tahay mid ka mid ah nidaamyada proton-ka ugu casrisan ee dalka, oo ka kooban cyclotron, beamline, laba qolal daaweyn gogosha go'an iyo saddex qolal daaweyn wareegaya.
Qalabka loo yaqaan 'Cyclotron' waa aalad 90-tan ah oo loo habeeyay si ay u soo saarto qiyaastii 5 tiriliyan protons sekenkiiba ka dibna dardar geliso protons banaanka xarunta iyada oo loo marayo waddo wareegsan qiyaastii 100,000 mayl daqiiqaddii, ama 0.61 jeer xawaaraha iftiinka, si loo abuuro laambad awood u leh si sax ah u gaadhaan burooyinka. Qolofka loo yaqaan 'proton beam' wuxuu ka soo safraa cyclotron ilaa xariiqa waardiyaha, kaas oo dhererkiisu gaarayo dhererka dhismaha, oo adeegsanaya taxaneyaal elektaroonig ah si uu ugu fooraro oo u foorariyo laydhka qolka daweynta kasta. Laga soo bilaabo halkaas, protons-ka waxaa la galiyaa si sax ah farsamo ahaan mid ka mid ah labada qolalka daaweynta gogosha go'an ama saddex qolalka gantry wareegga iyada oo loo marayo daloolo khaas ah. Mashiinka xawaaraha ee 280-tan ee wareegyada wareegga ah wuxuu ku wareegaa 360˚ bukaanka si loo hubiyo xagal daweyn habboon.
7 Faa'iidooyinka ugu weyn ee Tiknoolajiyadda Beerka ee Proton Therapy Beam Technology
Saxnaanta Laser-u eg
Protons waa la maamuli karaa si loo joojiyo loona keeno shucaac toos ah burada oo aan mar dambe sii dhicin.
Daaweynta 'Proton therapy' waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay ku kala duwanaan karaan xoogga shucaaca heer kasta oo burada dhexdeeda ah, taasoo aan suuragal ahayn teknoolojiyad kale.
Daaweynta noocyo badan oo buro ah
Tiknoolajiyadda daaweynta proton-ka ayaa ballaarineysa xulashooyinka daaweyn ee lagu daaweynayo burooyinka waaweyn iyo kuwa qaab-darrada aan joogto ahayn. Waxay kaloo oggolaaneysaa noocyo badan oo burooyin ah in lagu daaweeyo marka la barbar dhigo wixii suurta gal ka ahaa protons-ka faafa ee faafa.
Dhacdada hoose ee burooyinka heerka labaad
Yaraynta sunta shucaaca waxay keentaa in hoos u dhac ku yimaado burooyinka sare marka loo barbar dhigo shucaaca raajada caadiga ah.
Dhibaatooyin aan badnayn
Sababta oo ah daaweynta proton waxay ka ilaalisaa unugyo caafimaad qaba oo ku xeeran burooyinka, dhibaatooyinka soo raaca sida shubanka, lallabbo, madax xanuun iyo cunitaanka cunitaanka ayaa aad u yar. Daaweynta kadib, bukaanada badankood waxay dib u bilaabaan howlahooda maalinlaha ah.
Waqti daaweyn dhakhso ah
Waxaan ku beddelnay aalado culus, qalqalloocan oo ka mid ah tikniyoolajiyadii proton-pass firdhin ee duugista leh waxaanan ku beddelay iskaanka dhawaaqa birta. Si ka duwan teknolojiyadii hore, qorshaheena daaweynta ayaa lagu ridi karaa kumbuyuutarka oo lagu dhammeyn karaa daqiiqado gudahood si bukaanku si dhaqso leh ugu laaban karaan noloshooda.
Kooxdayada caanka ah ee caanka ku ah caafimaadka adduunka waxaa ka go'an inay siiyaan bukaanka bukaanka ugu badan, oo dhamaystiran daryeelka kansarka, waxayna soo bandhigaan ugu dambeeyay horumarka caafimaad iyo teknolojiyada. Wax dheeri ah aqriso
Faahfaahinta Daaweynta Proton Therapy &
Nolosha Inta Lagu Jiro Daweynta
Daaweynta 'Proton' waa daaweyn aan caadi ahayn oo badanaa xanuun aan xanuun lahayn, xilligaas oo bukaanjiifku aanu dareemin wax dareen jidh ahaaneed ah oo ka imanaya biraha proton, waxay maqlaan dhawaqa aad u yar waxayna la kulmaan xanuun yar. Si ka duwan teknolojiyadii hore, kulan kasta oo daaweyn ah wuxuu qaadanayaa 30 daqiiqo, iyadoo waqtiga daaweynta dhabta ahi qaadanayo 1 ilaa 3 daqiiqo oo keliya. Fiidiyowga labada-qaab buuxa iyo maqalka wuxuu u oggolaanayaa xubnaha kooxda caafimaadka iyo bukaannada inay wada xiriiraan inta hawsha lagu jiro.
WAA MAXAY SAAMAYNTA GARABKA EE KU SOO DHAWEYNTA DHAQANKA BULSHADA?
Xaaladaha badan, waxyeelada laxiriirta daaweynta shucaaca banaanka sida shubanka, madax xanuunka iyo luminta rabitaanka cuntada ayaa ka yar daaweynta proton-ka marka loo eego daaweynta raajada. Bukaanka badankood waxay awoodaan inay sii wataan howlahooda caadiga ah inta lagu gudajiro daaweyntooda, oo ay kujirto shaqada, jimicsiga iyo is dhexgalka bulshada. Si kastaba ha noqotee, dhammaan daaweynta kansarku waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido-darro. Hubso inaad kala munaaqashoodo dhibaatooyinka ka dhalan kara iyo dhibaatooyinka soo raaca, iyo sidoo kale xulashooyinka daaweyn, ee takhtarkaaga cilmi-nafsiga.
Su'aalaha ku saabsan daaweynta proton? Waan caawin karnaa.
Baro Su'aalaha La Isweydiiyo
Taariikhda Borotokoolka Proton Beam Therapy
Sanadkii 1946, fisikiste Mareykan ah iyo hogaamiye kooxeedkii hore ee Mashruuca Manhattan Robert Wilson ayaa aasaaska u dhigay goobta lagu daaweynayo proton therapy iyadoo lagu daabacayo warqaddiisa sumadda leh, "Isticmaalka shucaaca ee Rajada Protons." Waraaqdan, isagu wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee soo jeediya in protons loo adeegsan karo caafimaad ahaan, faafin nudaha caadiga ah isla markaana u oggolaanaya meelaynta ugu badan ee qiyaasta shucaaca gudaha buro.
Markii ugu horreysay ee dawooyinka shucaaca loo yaqaan 'proton radiation treatment' waxaa lagu fuliyay bartamihii 1950-meeyadii iyadoo la adeegsanayo qalab-xawaare ku-buufin ah oo loo dhisay baarista sheybaarka fiisikiska ee Jaamacadda California, Berkeley, iyo ka dib Shaybaarka Harvard Cyclotron. Xaruntiisii ​​daaweynta ugu horreysay ee cusbitaalka saldhigeedu yahay cusbitaalka ayaa laga furay 1990-kii Xarunta Caafimaadka ee Jaamacadda Loma Linda ee ku taal Koonfurta Kaliforniya. Wixii markaas ka dambeeyay, in ka badan labaatan xarumood oo daaweynta diiradda saareysa ee bukaan-socodka waxay ka fureen Mareykanka, oo ay kujirto Xarunta Caafimaadka Kansarka Kansarka ee California ee San Diego.
Qiimaha Daaweynta Proton
Qiimaha daaweynta proton waxay kuxirantahay nooca kansarka, goobta buro, marxalada, inta daaweyn loo baahan yahay, iyo qodobo kale. Inkasta oo mararka qaarkood ay ka qaalisan tahay shucaaca caadiga ah ee loo yaqaan 'X-Ray shucaaca', dhibaatooyinka soo raaga muddada-dheer iyo fursadaha soo noqoshada ayaa yaraanaya sababo la xiriira tiknoolajiyad aad u horumarsan, oo sax ah oo si weyn u yareynaysa shucaaca unugyada iyo xubnaha caafimaadka u dhow.